AnTuTu na - ewere iQOO Pro 5G iji nwalee ya ma kọwaa nkọwa ya bụ isi | Gam akporosis
AnTuTu na-ewere iQOO Pro 5G maka nnwale nnwale wee kọwaa nkọwa ya bụ isi
Ule nyiwe, dika Antutu, bụ otu n'ime akara ngosi kachasị mkpa n'ụwa nke smartphones. Ndị a na-enyocha ọnụ iji nye mkpebi ikpeazụ na arụmọrụ ha nwere ike nweta yana, ọbụlagodi, tupu ha erute n'ahịa ahụ.
El iQOO Pro 5G Ọ bụ ọkọlọtọ nke ewepụtabeghị, mana ekwuputala ya. Agbanyeghị, anyị amatala ọtụtụ isi njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ ya, anyị ekwuola maka ndị a n'oge gara aga. Ugbu a, ọ bụ AnTuTu na-akọwapụta ike ya ma kwenye ụfọdụ n'ime àgwà ya.
Dika ihe AnTuTu debara aha na nchekwa data ya n'oge gara aga, iQOO Pro 5G debara aha ya dika ihe nlere Vivo n'okpuru aha njirimara «V1916A» - eji igwe eji eme ihe Snapdragon 855 Plus site na Qualcomm, nke hiwere isi na nke Ịgba Cha Cha wee rute oge kachasị ọrụ nke 2.96 GHz ekele maka otu n'ime ya asatọ. Nke a, dịka ikekwe ịmaraworị, na-etu ọnụ ike niile Adreno 640 GPU nwere ike ịnye.
iQOO Pro 5G site na Vivo na AnTuTu
Ejirila a nyochaa ngwaọrụ ahụ Ngosipụta FullHD + na mkpebi 2,340 x 1,080 pikselụ, nke na-egosi na ọ ga-enye akụkụ dị nkenke ma dịkwa mma 19: 5: 9. Na nke ya, ọ na-agba ọsọ gam akporo achịcha sistemụ, dị ka e hinted na mbụ. Na mgbakwunye na nke a, ọ na-akwadebe ebe nchekwa 6 GB Ram wee bịa na ebe nchekwa dị n'ime 256 GB, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịhụ ụdị dị iche iche nke nchekwa ekwentị, yabụ a ga-enye ya na ọnụahịa dị iche iche.
Ndị a bụ nkọwa akọwapụtara nke Vivo iQOO Pro 5G
N'ikpeazụ, ọ dị mma ịkọba nke ahụ akara ikpeazụ ya bụ 497,179, nke na-agwa anyị ọtụtụ ihe banyere ike nke ọdụ a ga-etu ọnụ, nke ndị ọrụ ahụ e kwuru na mbụ na-akwado. N'ebe ọwụwa anyanwụ August 22 ọ ga-ebupụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » AnTuTu na-ewere iQOO Pro 5G maka nnwale nnwale wee kọwaa nkọwa ya bụ isi
Ngwa YouTube dị ugbu a na Amazon Fire TV
Push nkume ma jikwaa clones iji dozie esemokwu na isometric Sole Light